‘कलाकारीताबाट देशको लागि केहि योगदान गर्न मन छ’ : जनयुद्धका बालकलाकार स्वर्णिम शाही | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७६ माघ १० गते १०:०६
यसै क्षेत्रको एक जिल्ला हो कालिकोट, जहाँ सयौं सर्जक स्रष्टा तथा देशको लागि योगदान गर्ने व्यक्ति जन्मिए । यसै पुण्य भुमिमा जन्मिएका थुप्रै मध्येका एक हुन कलाकार स्वर्णिम शाही । कलाकार स्वर्णिम शाहीले आफ्नो जीवनको आधार स्तम्भ तयार गर्ने १४ बर्ष उमेर देखिको त्यो उर्जावान करिव १० वर्षे समय जंगल मै विताए । उनी कक्षा ८ पढ्दै गर्दा शसस्त्र जनयुद्धमा होमिए । उनको यो रहर नभई बाध्यता थियो । तत्कालिन माओवादी जनयुद्धको वेला पाटीले उनलाई कलाकारीता क्षेत्रको जिम्मेवारी एिसँगै शाहीको गायन, नृत्य तथा नाटकककारको यात्रा सुरु भएको थियो । मातृभुमि र देशको लागि गीत संगीतबाट पनि योगदान गर्न सकिन्छ भन्दै पछिल्लो समय काठमाडौंमा शास्त्रिय संगीत सिकिरहेका शाहीले आफ्नै शब्द तथा स्वरमा ‘चलन चलिया’ नामक लोकभाकाको गीत बजारमा ल्याएका छन । प्रस्तुत छ, उनै कलाकार स्वर्णिम शहीसँग दर्पण दैनिककले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
म गीत संगीतमै लागेको मान्छे, शास्त्रीय संगीतको विद्यार्थी पनि भएको कारण संगीत सिकिरहेको छु । गीत गाउने, लेख्ने, अनि अभिनय गर्ने काम निरन्तर छ ।
तपाईले हालसम्म कतिवटा गीत बजारमा ल्याउनु भयो ?
मैले लेखेका गीतहरु भन्ने हो भने, करिब १७ वटा जति रेर्कड भईसकेका छन । मैले क्मपोज गरेका गीतहरु करिव ६ वटा जति होलान । आवाज दिएर कोरस गरेका गीतहरु करिव ५/७ वटा होलान । मेरो आफ्नै भनेर ‘चलन चलिया’ भन्ने एउटा गीत बजारमा आएको छ । मैले थुप्रै गीतमा अभिनय पनि गरेको छु ।
यो ‘चलन चलिया’ भन्ने गीत चाँहि कस्तो गीत हो ?
यो गीत पर्यटन र संस्किृति दूईवटा बिषयमा आधारित छ । यसमा पश्चिम नेपाल भनेर चिनिने तथा डेउडा भाका तथा खस संस्किृतिमा आधारित विषय बस्तुलाई उठान गरिएको छ । यो गीतले सुदुर तथा मध्य पश्चिम क्षेत्रको धर्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, ताल तलैया तथा अन्य मौलिक परम्पराको समष्टिगत ब्याख्या गरेको छ । कलाकर भईसकेपछि जन्मभुमि र देशप्रतिको दायित्व निभाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले यो गीतको भिडियोमा पनि बिशुद्ध रुपमा मौलिक भेषभुषा पनि देखाइएको छ । गीतमा पुरुष स्वर शब्द, संगीत, निर्देशन, अभिनय र क्मपोज म आफैले गरेको छु, भने स्वरमा गायिका माण्डवी त्रिपाठीले साँथ दिनु भएको छ ।
वैतडी छलिया, कालिकोट हुड्क्या नाच
चलन चलिया, देडडा, मागल, झोडा खेल्न्या
मार्सीधान झुल्याको, हुम्ला रामो हिउँ पड्क्यो
मालचरी डुल्याको, राराताल रमाइलो लाग्दो
रंग थरीथरी, खप्तडी पाटन फूल्न्या
लाउछिन् शीरभरि, वुक फूल बझांगकी चेली
सुर्खेत काँक्रेविहार, डोटी, अछाम, रामारोशन
माघी, दशै, तिहार, चाडपर्व चल्याका हाम्रा
कन्चनपुर कैलाली, तराई बर्दिया बाँके
फल्छ धानको बाली, अन्नको भण्डारक्षेत्र
अपि र सैपाल, पचाल झरना, पञ्चदेवल
जाउला अलि ताल, उग्रतारा दर्शन गरी
डोल्पाका पाटन, बहुमूल्य यार्सागुम्वा
आइ सौराइ काटन, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट
जुम्ला स्याउको खेती, दैलेख सुन्तला जुनार
चाँडै आउला भेटी, मालिकाकी माताकन ।।
गीत बजारमा आईसकेपछि के कस्ता प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
गीत सार्वजनिक भए लगत्तै दर्शक श्रोताले निकै नै रुचाउनु भयो । जे जति प्रतिक्रिया आए ति प्रतिक्रियामा गीत समय सान्दर्भिक, अति नै मिठो, अनि गाँउ समाज परिवेश सुहाउदो भनेर आएका छन । उत्साहजनक प्रतिक्रिया नै आएका छन । गीतमा म आफैं सर्जकको आखाँले हेर्दा त धेरै कमजोरी देख्दछु तर दर्शक श्रोता आफन्त सवैले गीतको निकै प्रसंशा गरेका छन ।
आउने गीतहरुको तयारी कस्तो भईरहेको छ ।
थुप्रै गीतको तयारी भईरहेको छ र आधुनिक गीतहरु बजार ल्याउने तयारी गर्दै छु । त्यस्तै, फिल्मी गीतहरुको पनि तयारी गर्दै छु ।
गीत संगीत क्षेत्रको यात्रा कसरि सुरु भयो ?
मेरो गीत संगीतको तर्फको यात्रा अलि फरक छ । मेरो गीत संगीतको यात्रा राजनीति अभियानबाट सुरु भएको छ । म जब सानो किरोरावस्थामा थिए, सो समयमा देशमा एउटा द्धन्द्ध सुरु भयो जसलाई महान जनयुद्ध पनि भन्ने गरिन्छ । म जन्मेको जिल्ला कालिकोट नेपालकै बढि द्धन्द्ध प्रभावित जिल्ला थियो । त्यतिखेर हाम्रा गाउका युवाहरु सवै माओवादी जनयुद्धमा होमिएका थिए । मेरो आफ्नै दाई पनि लाग्नु भा थियो, उहाँहरु माओवादीमा लागेपछि गाँउमा सरकारी पक्षबाट निकै दमन हुन थाल्यो । म त्यति खेर १४ बर्ष को थिएँ, जब सरकारी सेनाले तिमीहरु माओवादी हौ भनेर दमन गर्न थाल्यो बाध्य भएर माओबादी जनयुद्धमा होमिए ।
सुरुमा मलाई बिद्यार्थी फाँटमा कार्यक्षेत्र तोकियो, काम गरियो । त्यो क्षेत्रको काम गर्दा गर्दै मलाई मादल बजाउन आउने नाच्न खुब रुचि गर्ने भएकोले पार्टिले जनयुद्ध कलाकारमा कार्यक्षेत्र छुट्यायो । त्यतिबेला मैले जनयुद्धकालीन बाल कलाकार टयाग पाएको थिए । मरो संगीत यात्रा यहिँ बाट सुरु भयो । तिनै जंगलका रुखहरु भोक, प्यास, निद्रा, आफन्त तथा घर परिवार नभनि रात दिन देशको लागि भन्दै कलकारीताबाट काम गर्दा गर्दै अगाडी बढें । म ब्यबसायीक कलाकार बन्छु भनेर त्यहाँ दुख गरेको चाँहि पक्कै थिएन । नचाहदा नचाहदै जनकलाकार बनियो, हो यहिँ जनकलाकार बाट मेरो यात्रा तय भयो ।
त्यो द्धन्द्धकालिन समयमा जनकलाकार भएर कस्ता कस्ता गीत गाउनु भयो ? के गर्नुभयो ?
म जनयुद्धमा होमिएको बालकलाकार अझ भनौं जनकलाकार हामीले जन जागरण, समानता, देशको माटो तथा जनयुद्ध कसरी सफल बनाउने भन्ने बिषयमा गीत गाईन्थ्यो । म गीत सँगै अभिनय, डान्स तथा बाजा बजाउने पनि काम गर्थे । मैले गीत गाउदा माथल्लो स्तरका कमान्डरहरु निकै नै खुसि हुनुहुन्थ्यो, प्रसंशा गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा मलाई हौसला मिलेर झन झन खारिदैं गए । त्यति वेला न त मर्नलाई डर हुन्थ्यो नत अन्य कुनै प्रकारका दुख अनुभव हुन्थ्यो ।
तपाईका जनयुद्धकालीन कलाकार साँथीहरुको अवस्था हाल कस्तो छ ?
तत्कालीन समयका कलाकार योद्धा साँथीहरु कोहि व्यवसायीक कलाकार बन्नु भएको छ । कतिपय साँथीहरु निरन्तर संघर्षमै हुनुहुन्छ, कतिपय साँथीहरुले जनयुद्धमै शहिद हुनुपर्यो भने, कतिपय अंगभंग भएर पिडित हुनुहुन्छ, त्यस्तै, कतिपय साँथीहरु त गीत संगीत क्षेत्रबाटै पलायन भईसक्नु भएको छ । थुप्रै साँथीहरु पिडामा हुनुहुन्छ, भने थुपै्र साँथीहरु बिदेश पलायन हुनु भएको छ ।
जनयुद्धको बेला कलाकारहरुले ज्यान गुमाएका होलान नि ?
युद्धकाल हो, जहाँ होमिएका योद्धाहरु मर्न र मार्न तयार भएर मैदान उत्रिएका थिए । तिनै मध्येका फरक फरक टिम थिए जुन मध्ये एक थियो कलाकारिता क्षेत्र त्यसकारण थुप्रै कलाकारहरुले ज्यान गुमाए, अंगभंग भए, क्षतबिक्षत भए । मलाई एउटा घटना याद छ, डोटिको मुडभरा भन्ने ठाँउमा सास्किृतिक कार्यक्रम चलिरहेको थियो सोहि क्रममा एक्कासी घेरा हालेर सरकारी सेनाले आक्रमण गरेको थियो । जहाँ चारजना जनकलाकारले कार्यक्रम स्थलमै ज्यान गुमाए भने हामी चाँही बाच्न सफल भयौं । यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यस्ता त थुप्रै घटना भएका छन ।
शान्ति स्थापना पछि गीत संगीतको यात्रालाई कसरि अगाडी बढाउनु भयो ?
गीत संगीतको क्षेत्रमा मेरो व्याक्तिगत औपचारिक यात्रा त शान्ती स्थापना पश्चात नै अगाडी बढेको हो । त्यो भन्दा अगाडी त सामुहिक रुपमा जनचेतना तथा क्रान्किारी ग्ीतहरु गनईन्थ्यो । शान्ति स्थापना पश्चात माया प्रेम समाज भेष भुषा तथा माटो सुहाउने गीत सृजना गर्न थाँले ।
जनयुद्ध कालमा गीत मार्फत जनतालाई सपना बाँड्दै हिंड्ने मध्येको तपाई एक हुनुहुन्छ ? ति सपना पुरा नहुँदा कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ ?
यो अत्यन्तै मनछुने प्रश्न गर्नुभयो, हामीले समाज परिवर्तनको लागि प्रशिक्षण अनुसारको गीत जनता समक्ष गुन्जाउने गर्दथयौं । हो हाम्रा गीतले त्यतिखेर जनतामा आशा थपिदिन्थ्यो । तर हालको नेतृत्व जनताले खोजेका कुराहरु, क्रान्तिले गर्ने भनेका कुराहरु जे थिए त्यो भन्दा ठिक उल्टो भएको छ । जनयुद्धको लिडर यस्तो अवस्थामा आएर भाँसिदा हामी सिपाहीहरु पनि कुहिरो भित्रको काग भएको जस्तो लाग्छ । तर हामी सिपाही हौं अझैं हामीले परिवर्तनको लागि लाग्नु पर्छ, समाजलाई स्वच्छ सभ्य बनाउन हामी लागि पर्नु पर्ने हुन्छ । जनयुद्धमा जुन खालको सपना बाँडिएको थियो तर जसले त्यस्तो सपना बाँढ्न लगाए उहाँहरु अहिले राजतन्त्र भन्दा झन खराव भएर गए । यसले गर्दा कहिलेकाँही त पछुतो पनि लाग्छ ।
म शास्त्रिय संगीतको बिद्यार्थी भएकोले यसै क्षेत्रमा सिक्दै काम गर्दै अगाडी बढ्छु । मेरो गायिकी तथा कलाकारीतालाई निखार्दै लाने योजना नै मुख्य योजना हो । म शहिद परिवारको मान्छे हो । मेरो दाई जनयुद्ध मै बित्नु भयो, उहाँको बाल बच्चा हाल यतै म सँग बस्छन । परिवारको जिम्मेवारी पनि छ ।
समाजको लागि अब तपाईको योगदान के हुन्छ ?
मुख्य कुरो म एउटा कलाकार मैले समाजलाई अरु भन्दा केहि बढि दिनै पर्छ । समाज परिवर्तन, समानता तथा समाजको विकासको लागि यसक्षेत्रबाट योगदान रहनेछ । गीत संगीतबाट नेपाली माटोको लागि केहि गर्ने धोको छ ।
समाजको लागि एउटा ईतिहाँसको कालखण्ड योगदान गरेको तर हाल गुमनाम अवस्थामा रहेको एउटा सिपाहीलाई जुन स्थान दिनु भयो त्यसको लागि दर्पण दैनिकलाई धेरै धेरै धन्यबाद । मेरो भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको गीत सुनेर हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु ।